Win နှင့် Zaw အတွက် UGMH မှထိုင်းနိုင်ငံကို Cyber စစ်ပွဲဆင်နွှဲ – XB Media Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ဇော်လင်း နှင့် ဝင်းဇော်ထွန်းတို့ ၂ ယောက်ကို လိပ်ကျွန်း (ကော့ တောင်ကျွန်း) လူသတ်မှုအတွက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမယ့် ခိုင်မာတဲ့သက်သေပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ CCTV မှတ်တမ်းများကိုဖျက်ပြီး တရားခံအစစ်ကို ကျွန်းခံရဲများက ဖုံးကွယ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်းခံရဲများနှင့် လူသတ်တရားခံတို့ဟာ သက်သေများဖျောက်ဖျက်ပြီး ထိုကျွန်းတွင် အလုပ်လာလုပ်နေသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ယောက်ကို ထိုးကြွေးခဲ့ပါတယ်။ ဝင်း နဲ့ ဇော်က သူတို့မသတ်ကြောင်း ဘယ်လိုပင်ငြင်းဆိုစေကာမူ ထိုင်းရဲများမှ ဖိအားပေးဝန်ခံခိုင်းပြီး ထိုင်းတရားရုံးက သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝင်း နဲ့ ဇော်အမှုကို ထိုင်းနိုင်ငံသားများပင်မကျေနပ်ကြပါ။ သို့သော်လဲ ထိုင်းတရားရုံးမှ အယူခံတွင် သေဒဏ်ကို အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar nationals Zaw and Win were wrongfully sentenced to death for the killing of two British backpackers on Thai holiday island of Koh Tao without clear evidence. All of the evidences and CCTV records had been deleted and real culprit is being cover by local police. Even though, both Win and Zaw denied the crime and appealed justice and innocent, Thai Police forced the two migrants to admit to the murder as scapegoats. Even, Thai citizens are not agreeing with this investigation.
အတွင်းသတင်းများအရ အသတ်ခံရသူ ၂ ဦး နှင့် လိပ်ကျွန်းရှိ နာမည်ကြီး AC bar ပိုင်ရှင်၏ သားဖြစ်သူတို့က ၃ ပွင့်ဆိုင် ဇတ်လမ်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ အသတ်ရမည့်ညက AC bar ပိုင်ရှင်သားနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား အတွဲတို့ ပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် AC bar ပိုင်ရှင်၏သားကို အမှုမှ ကင်းလွတ်ခဲ့စေပြီး မဆိုင်သည့် ဝင်း နဲ့ ဇော်ကို ထိုးကြွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ AC bar ပိုင်ရှင်မိသားစုသည် ထိုလိပ်ကျွန်းပေါ်တွင် ဂိုဏ်တစ်ခုအသွင်ရှိပြီး ကျွန်းခံရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ် ဩဇာသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုလဲသိရပါတယ်။ ထို့အပြင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသူထံတွင်တွေ့ရသော သုတ်ပိုး နှင့် ဝင်း နဲ့ ဇော် ကမကိုက်ညီခဲ့ပါ။
According to inside news, we are told that, two victims and the son of famous AC bar owner had some issues. The son of AC bar owner and the couple had arguments on the night of the murder. But the son of the AC bar owner was set free from the murder case and two innocent migrants, win and zaw, were accused as murderers. AC bar owner family isalocal mafia figure on the island and has strong influence over Koh Tao police. Also, the DNA tests results are not same.
ဝင်း နဲ့ ဇော်ကို ဒီအမှုကို ဝန်ခံရင် ပိုက်ဆံပေးမည့်အပြင် ၃ နှစ်လောက်နဲ့ လွတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ ညှိခဲ့ပြီး ငြင်းဆန်နေရင် သတ်ပစ်မည်ဟု ချိန်းခြောက်ခဲ့တယ်။ ဒီလောက်အထိဖြစ်ခဲ့လို့ သူတို့ ၂ ယောက်က မသတ်ပဲနဲ့ သတ်တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒီအမှုမတိုင်ခင်မှာပဲ AC Resort မှာတည်းခိုနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်တစ်ယောက်အခန်းက ပစ္စည်းကိုခိုးယူတယ်လို့ မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကို စွပ်စွဲပြီး ကားတာယာ စွပ်ပြီး မီးရှို့သတ်တာလဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်မှ တရားခဲအစစ်ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လင်မယားကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်။ ဝင်းနဲ့ဇော်အမှုရဲ့ မျက်မြင်သက်သေ တွေထဲက မြန်မာတစ်ယောက်ကို ဖုံးဖိပေးထားဖို့ ငွေပေးခဲ့ပြီး နောက်တော့ အစဖျောက်လိုက်တယ်လို့လဲ အတွင်းသတင်းတွေအရသိထားပါတယ်။ AC bar မိသားစုဟာ ကော့တောင်ကျွန်းမှာ လူမိုက်ဂိုဏ်းအသွင်ရှိပြီး ဩဇာ ကြီးမားပါတယ်။
During torture investigation, Win and Zaw were told they will getalot of money and will release after3years threatened to if they admit to the murder case or else they will be killed. Fear of being killed, Win and Zaw confessed by forced. Before this murder case, one of Myanmar national was killed by burning alive with car tire because being accused of stealing from the British customer of AC resort. The real thieves, British couples were arrested only after Myanmar worker was wrongly accused and killed. We also know of one of the witnesses, Myanmar national was given money to cover up story and later that the witness also missing. AC bar family is local mafia figure and has strong influence over the island.
ကျနော်တို့အနေနဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခု၏တရားစီရင်ရေးအား တရားသည်ဖြစ်စေ မတရားသည်ဖြစ်စေ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ခြင်းပြုလို့မရပါဘူး။ သို့သော် မတရားသောအဖြစ်ကို မတရားဘူးလို့ လူသိအောင်ပြောလို့ရသည်။ ထိုင်းတရားရေး၏ ဘက်လိုက်ဆုံးဖြတ်မှု၊ မတရားအကျင့်ယုတ်မှုများကို ထိုင်းနိုင်ငံသားများနှင့်တစ်ကွ အားလုံးသိအောင်ပြောဖို့ တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသား ညီအကိုများအရေးကို ကျနော်တို့မှ မလုပ်လျှင် ဘယ်သူမှလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Of course, the law and jurisdictions ofacountry cannot be interfered but unfairness and injustice can be told publicly. Thai’s fail of justice and unfairness should be known by all of the Thai citizens and the rest of the world. Nobody will take care of the issues or crisis of our Myanmar fellow citizens unless we ourselves do.
Union Of Underground Myanmar Hackers
မတရားတာကို သိရက်နဲ့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့မနေနိုင်ပါ။ တတ်နိူင်တဲ့ဖက်က ပြန်တုန့်ပြန်ပါမယ်။
ခံနိူင်တဲ့သူများ (သို့) ဦးကျိုးနေတဲ့ ကျွန်စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်များခင်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ မလုပ်ချင်ရင် မလုပ်ပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် သောက်ပေါက်ကလေးတွေတော့ တစ်ခုခုနဲ့ ဆို့ပေးထားကြပါ။
မှန်ပါတယ် လုပ်လဲအဖြေက ပြောင်းဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ငြိမ်ခံနေရတော့မှာလား။ ခင်ဗျားတို့ဖာသာပဲ -င်လေးကုန်းပြီး ဆီလေးစွတ်ထားပါ။ ကျနော်တို့ကိုအဖော်လာမညှိပါနဲ့။
ကျနော်တို့ ဖုန်းဘေ အလှူမခံပါ။ UGMH နာမည်သုံး၍သော်လည်းကောင်း Op Thailand ကိုအကြောင်းပြ၍သော်လည်းကောင်း အလှူခံခဲ့ရင်လုံးဝမထည့်ပါကြပါနဲ့။
ပိုင်တံခွန်ကြောင့် ဘန်ကောက်မြို့က လမ်းမကြီးမှာ လူတွေပြည့်နှက်သွားခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို